Saturday April 16, 2022 - 03:41:26 in Wararka by Super Admin
Dalka Jamhuuriyadda Somaliland waa dal dimuqaraadi ah oo leh dastuur ku fadhiya hanaanka xoriyaadka iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha ee loo yaqaano baaqa caalamiga ah ee xuquuqul insaanka( UDHR ).
Qiimaha dastuurka dalka waxa laga eegaa ama laga qiimeeyaa qsybta loo yaqaan ( Bill of rights) oo uu dastuurka jamhuuriyada Somaliland yahay kuwa ugu wanaagsan .
Haddaba si loo ilaaliyo quruxda iyo qiimaha qaran leeyahay waa in dastuurkiisa iyo xeerarkiisa la ilaaliyaa si aan xagal daac ugu iman hanaanka dimuqaradiyadeed ee dalka.
Dastuurka Jamhuuriyada Somaliland saxaafada madaxa banaan waxa uu siiyey xuquuq iyo xoriyad madax-banaani oo aan xataa u baahneyn in xeerar ka hor imanaya dastuurka lagu xakameeyo bal u fiirso qodobka 32naad ee dastuurka jamhuuriyada Somaliland faqradiisa sadexaad;
QOD 32AAD EE DASTUURKA SOMALILAND
1- Muwaadinkasta waxa uu xor u yahay in uu ra'yigiisa ku soo bandhigo qoraal, hadal, muuqaal, suugaan ama qaab kale oo xeerka waafaqsan.
2- Muwaadinkasta waxa uu xor u yahay in uu abaabulo kana qayb qaato, kulan ama banaan bax nabadeed oo xeerka waafaqsan.
3- saxaafada iyo warbaahinta kale waxa ay ka mid yihiin xoriyaadka aasaasiga ah ee ra'yi dhiibashada, waxayna leeyihiin madax-banaanidooda; way reeban tahay talaabo kasta oo lagu cabudhinayo; hawshoodana xeer baa nidaaminaya.